Ụlọ nke Mega Pack nke Airbus A320 FSX
Ụlọ nke Mega Pack nke Airbus A320 FSX 1 afọ 6 ọnwa gara aga #1314
Enwere m simming maka ezigbo 15 yrs na nke a ga-abụ ngwugwu kachasị mma ọ bụla n'ebe ọ bụla! ma .......
Ọ na-amasị m iche na m maara nke ọma na ihe niile na-eme ka ọ dị mfe ma enweghị m ike ịnweta ngwugwu a iji rụọ ọrụ aghhh!
Ọ ga-amasị m ikele ụmụ nwoke ndị tinye ngwungwu a ọnụ. Nzuzo & Ọchịchịrị na nke a emeela ka ike gwụ m, m na-anwale ihe niile, FSX-SP2 arụnyere mana ọ bụla nlele, ogwe, bọtịnụ na-anwụ kpamkpam, ctrl + e ihe niile ..... nwere ike ndị na-emepụta ngwugwu a biko mee ndozi ka ọ bụghị Nzuzo & Ọchịchịrị, Achọpụtara m na ọtụtụ ndị mmadụ nwere otu nsogbu ahụ, ọ ga-abụ ụbọchị ekeresimesi m kacha mma oge niile! (ps etinyela oge 3 na chi adighi)
Ụlọ nke Mega Pack nke Airbus A320 FSX 1 afọ 6 ọnwa gara aga #1329
bit disapointed ọ dịghị aka na a forum :(
Ụlọ nke Mega Pack nke Airbus A320 FSX 1 afọ 6 ọnwa gara aga #1333
Ị ghaghị ime mgbanwe ndị a kọwara na saịtị nbudata nke mkpọ ahụ.
A kọwara nke ọma ihe ị ga-eme, rụọ ọrụ a. Ọ bụrụ na ịmechara ihe niile nke ọma .it kwesịrị ịrụ ọrụ. Ọzọkwa, ikwuputeghị na ị nwere FSX SP2 arụnyere n'ụzọ ziri ezi, n'ihi na nke ahụ bụ ihe. Ọtụtụ ihe anaghị enwe ike ịrụ ọrụ na-enweghị ya. Ọzọkwa, nwere ike ịbụ na arụnyere ya nke ọma. Ọtụtụ mmadụ na-eme mkpesa banyere ya, mana ọtụtụ n'ime ha tụfuru usoro achọrọ. Ọzọkwa, ọ ga - abụ nke gị FSX gbajiri, yabụ lelee nke ahụ.
Yabụ, mepụta ụgbọ elu ndabara, họrọ ụgbọ elu ịchọrọ, tinye ya ọdụ ụgbọ elu ịchọrọ. Gbanyụọ niile, na m pụtara ihe niile, chekwaa ya DEFAULT. Ugbu a, gaa na FSX cfg file. Amaghị m nke OS ị nwere na PC gị, yabụ amataghị m ebe ọ dị. Na mpaghara MAIN, gbakwunye akara achọrọ, chekwaa ya.
Karịa, bido nke gị FSX ma nwalee ọzọ.
Ụlọ nke Mega Pack nke Airbus A320 FSX 1 afọ 6 ọnwa gara aga #1335
Ihe ngwungwu A320 dị ịtụnanya, ọkachasị maka n'efu na ugbu a nke a gụnyere Honeywell FMC. M furu ya nke ukwuu, oge niile ka ọ dị mma na FPS ma ebe ọ bụghị "Ọmụmụ Ọmụmụ" ọ ka na-enye ezigbo ego nke ihe ndị kwesịrị ekwesị dịka ịmalite, nfuli mmanụ, wdg.
Etinyela m ngwungwu a ugboro atọ (3) n'ihi mgbanwe nke kọmputa wee mezie nkwalite si FSX na P3D na enwetụbeghị nsogbu ọ bụla. Ihe ga-adị njọ na njedebe gị?
Ụlọ nke Mega Pack nke Airbus A320 FSX 1 afọ 5 ọnwa gara aga #1343
Daalụ maka enyemaka niile! M mesịrị nweta ya na-arụ ọrụ yeeeeaaah
M na-eji windo 10 nwere directX 12 ka m wee gbanwee ya na XXUMX directX na ihe niile yiri ka ọ na-arụ ọrụ ugbu a
ewezụga ọkụ ọkụ na igodo, echiche ọ bụla onye ọ bụla? ma eleghị anya nhazi a ga-arụ ọrụ maka ndị ọzọ nwere nsogbu
Daalụ maka setịpụrụ mma!
Ụlọ nke Mega Pack nke Airbus A320 FSX 1 afọ 5 ọnwa gara aga #1365
na-agba ọsọ na nchịkwa3
Gini mere ji enwe nsogbu mgbe nile ibido No engine nke abuo n'ime ugbo ugbo ala a nile? M na-eji FSX Ntan Steam
Ụlọ nke Mega Pack nke Airbus A320 FSX 1 afọ 5 ọnwa gara aga #1366
Jide n'aka na ozugbo ịmalite "Engine 1" na ị gbanwee "bọọ" na "Engines" .... mgbe ahụ ọkụ "Ngini 2"
Ụlọ nke Mega Pack nke Airbus A320 FSX 1 afọ 3 ọnwa gara aga #1378
Oge ọ bụla m chọrọ ịmalite ụgbọelu ahụ, ụgbọelu ahụ agbanyụ. Mgbe ahụ, m ga-amalitegharịa ha.
Ụlọ nke Mega Pack nke Airbus A320 FSX 7 ọnwa 2 ụbọchị ago #1567
Ezi ubochi oma o nwere ike onye nyere m aka. M etinyere ngwungwu a ma nwee ọ veryụ nke ukwuu, enwere m naanị otu nsogbu. Agachara usoro ibido usoro site na ntinye aka dịka akọwara na akwụkwọ ntuziaka ihe niile dị mma mana ozugbo m kwụsịrị ma na-agbachasị V2 niile injinia mechiri, tinyechaa ibugharị ụgbọ elu ahụ ọzọ ma kwughachi ihe niile otu m ga-ewepụ na enweghị nsogbu. Enwere m nsogbu gbaa ihe niile mana enweghị ọ joyụ
Ụlọ nke Mega Pack nke Airbus A320 FSX 7 ọnwa 2 ụbọchị ago #1568
A kọwara nke ọma ihe ị ga-eme, ihe ị ga - agbanwe na sim gị iji zere inwe njehie ahụ.
Mana, lee, ọ bụ ọzọ:
Mkpa: airbus na-egosi na Nzuzo & Ọnọdụ ọchịchịrị (igwe na ngwa gbanyụrụ). Gụọ akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ zuru oke nke François Doré, nke agụnyere ịmara usoro mmalite ya na Bleeds, onye edemede ahụ ka na-enye ọrụ Ctrl + E ka ịmalite engine na ọnọdụ Fly By Wire na akpaaka na "NORMAL LAW".
AKW BUKWỌ OBODO: Ọ bụrụ n’ofe ihu adịghị egosi, mgbe ahụ ịchọrọ FSX-SP2. Ogwe niile chọrọ ka opekata mpe FSX-SP2 ma ọ bụ FSX-Achọgharị ma ọ bụ FSX Ntugharị Steam ma ọ bụ Prepar3D ...
Ọ bụrụ na ụgbọ elu gị ebidoghị na ọdụ oyi ma ọ bụ ọdụ gbara ọchịchịrị ma ọ bụ ọ bụrụ na ụgbọ oloko gị ga - akwụsị ozugbo ọ kwụsịrị, nke a bụ n'ihi na ụgbọelu ndabara gị bụ ụgbọ elu eburula ụzọ nke FSX, ya na ULM, na-efe efe na "Ọdụ ụgbọ mmiri Friday".
Iji dozie nsogbu ahụ, ị ​​nwere ike ịmepụta ụgbọ elu, ya na ụgbọ elu nke nhọrọ gị, na ọdụ ụgbọ elu nke ịchọrọ, mgbe eburula ọnọdụ ahụ gbanyụọ usoro ụgbọ elu a (injin, batrị, mgbanye ọkụ) ma chekwaa ụgbọ elu ahụ. Site na ndenye igbe dị na windo "Chekwa ụgbọ elu" akpọrọ "mee nke a ụgbọ elu ndabere."
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: pieterburner